Accueil > Gazetin'ny nosy > Volamena miondrana any Dubaï : Tokony tsy hohadinoin-dRajoelina
Volamena miondrana any Dubaï : Tokony tsy hohadinoin-dRajoelina
Iray amin’ny firenena ifamezivezen’ny mpanam-bola i Emirat Arabo Mitambatra, indrindra fa i Dubaï. Ankoatry ny fizahan-tany sy ny fivezivezena dia sehatra ifanakalozana harena koa i Dubaï satria ireo mpanam-bola mandeha any dia mitondra vola. Ny firavaka no isan’ny mahasarika ny mpanam-bola satria iny no isan’ny itarafana ivelany ny maha-mpanam-bola. Ny firavaka vita amin’ny volamena izany.
Ny filohampirenena malagasy, Andry Rajoelina, dia vahiny omem-boninahitra manokana (invité d’honneur) ao amin’ilay « valandresaka sy fampirantiana momba ny haitao avo lenta eo amin’ny toekarena ara-kajy mirindra » (Conference et exposition sur les technologies de l’économie numérique), izay tanterahina any Dubaï amin’izao fotoana. Efa tamin’ny alakamisy izy sy ny delegasiona malagasy tarihiny no tonga any Dubaï.
Fantara koa moa fa hihaona amin’ny tompon’andraikitra isan-tokony any ny filoha malagasy, ka eo ny manam-pahefana ara-panjakana any DubaÏ fa eo koa ireo mpanam-bola isan’ny handray anjara amin’io hetsika io.
Koa satria efa hifanakalo hevitra amin’ny manam-pahefana any ihany ny filoha malagasy, ary fantatra fa i DubaÏ no isan’ny firenena iondranan’ny volamena avy eto Madagasikara, izay fiondranana an-tsokosoko fa tsy ara-dalàna, dia heverina fa tsy hohadinoin’ny filoha malagasy ny mamaritra fiaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana any Dubaï ny amin’ny fiarovana ny volamena sy harena sarobidy hafa avy eto Madagasikara izay miditra any DubaÏ.
Ny volamena manokana, raha ny fanazavana avy eo anivon’ny Banky Foiben’ny Repoblikan’i Madagasikara, tamin’ny taom-piasana 2019 dia nahatratra 18 Taonina ny volamena avy eto Madagasikara voasoratra any nefa 3 Taonina amin’io monja no voarakitra an-tsoratra hoe niala teto Madagasikara niazo an’i Dubaï. Ny dikan’izany, tamin’io taona io ihany dia efa 15 taonina ny volamena malagasy niondrana antsokosoko tany Dubaï.
Raha manao asa-marika tsotsotra ianao ka heverina fa 160.000 ariary ny vidin’ny volamena iray grama dia mamaritra any aùmin’ny 1.400 Tapitrisa dolara (1, 4 miliara dolara) ny vidin’io 15 taonina io. Dia samia mieritreritra fa ny fitambaramben’ny tetik’asam-panjakana hananganana fotodrafitrasa isa-taona sy ny fiahiana ny sosialy (fampianarana, fahasalamana, asa, trano fonenana, fandriampahalemana…) eto° dia tsy lanintsika io. Nefa isika mandady tongotra aman-tanana manjana-bola amin’ny Banky Mondialy, izay raha mahazo betsaka indrindra, 50 tapitrisa dolara.
Fahamendrehana izany ny hiresahan’ny filoha Rajoelina ny momba io fiarovana ny volamena malagasy lasa any Dubaï io.